ရေမလုံသော တံတိုင်းဖုံးလွှမ်းနေသော ပြည်ပပန်နယ်လ်များ တရုတ်စက်ရုံ၊ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၊ တရုတ် ထောက်ပံ့ပေးသူ-Jinan Zhengtang Insulation Insulation Insulation ပစ္စည်း Co.Ltd
ရေမလုံသော တံတိုင်းဖုံးလွှမ်းနေသော ပြည်ပပန်နယ်လ်များ
၁.ထူးချွန်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အရည်အသွေး
၂.အလင်းအလေးချိန် Sandwic Panel
၃.ကောင်းတဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Sandwich Pane
မော်ဒယ် No.: ZT-CBV
ထုပ်ပိုးခြင်း - ကာတွန်း
ထုတ်လုပ်မှု – 10000sq.mper လ
ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်း– ၁၀၀၀ SQ. M တစ်နေ့လျှင် M
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - ISO
၁၆ မီလီမီတာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပြည်ထဲရေး ပြည်ထဲရေး ထိန်းသိမ်းရေး PU Sandwicf Metorative Wall Wanel.Polyurethane Sandwich Panel. Polyurethaneh Sandwich Panel. Polyurethaneh Sandwich Panel. Polyure Foam Foam Foam Sandwich Panel. Polyure Foam Foam Sandwich Panel. Polyure Foam Sandwich Panel. Panel. Sandwich Panel. Sandwich Panel. Polyure Foam Foam Sandwich Panel.
သစ်သားလက်ရာပေါ်မှာ ပန်းချီပုံစံတွေ ဒါမှမဟုတ် ဒီဇိုင်းတွေရဲ့ သတ္တု သန့်စင်တဲ့ ပန်ကာတွေ၊ သတ္တုမြေမျက်နှာပြင်တွင် အုတ်၊ အုတ်၊ ကျောက်၊ ရေကြက်၊ ကြွေထည်၊ ကြွေထည်၊ မိုးဆိတ်၊ မျဉ်းကြောင်းများသည် ခုနစ်ကြိမ် ရွေးချယ်ရမည့် အရောင်ငါးဆယ်ရှိပြီး ၁၅ နှစ် မညှိုးနွမ်းမသွားစေရန် သေချာစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ပန်းကန်ပြားအလယ်တွင် ပိုလီရူရီသန်းအမြှုပ်ကို သန့်စင်ခြင်းနှင့် အပူဓာတ်သန့်ရှင်းရေး အလွှာတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အတွင်းပိုင်းသည် ပိတ်ထားသော ပေါက်ကွဲမှုအဆောက်အအုံ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်ရှိ အယ်လူမီနီယံအမြှေးက အပူအရင်းအမြစ်ကို ထိရောက်စွာ ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပြီး ယင်းကို သန့်စင်ပေးခြင်း၊ အပူထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စိုထိုင်းမှုအကာအကွယ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သစ်သားလက်ရာပေါ်မှာ သတ္တုထိန်းသိမ်းရေး ဘုတ်အဖွဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဒီဇိုင်းတွေဟာ မြင့်မားတဲ့ ဖိအား၊ ငလျင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ အလှ ဆင် ခြင်း နှင့် အတွင်း အဆင်တန်ဆာ များ တည်ဆောက် ရာ တွင် ကျယ် ကျယ်ပြန့် စွာ အသုံးပြု နိုင် ပါသည် ။
အပြင်ဘက်သတ္တု သန့်စင်ရေး ပန်နယ်လ်တွင် အဓိကအားဖြင့် သုံးပိုင်းပါဝင်သည်။ AI-Zn သယ်ဆောင်ထားသော သံမဏိပြား (သို့မဟုတ် အယ်လူမီနီယံပြား) ကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အထူးဖန်တီးမှုဖြင့် ကုသပေးထားသည်။ တင်းကျပ် သော ပီယူ အမြှုပ် သည် အလယ်အလွှာ ပေါ်တွင် သန့်စင် ထား သော အလွှာ နှင့် အလျားလိုက် စက္ကူ သို့မဟုတ် ဖန် အထည်အလိပ် ကို အတွင်း အလွှာ တွင် တပ်ဆင် ထား သော ဖန် အထည် များ အဖြစ် တင်းကျပ် သော ပီယူ အမြှုပ် အဖြစ် တပ်ဆင် ထား သည် ။